Ndeipi nzira yekutengesa yakawanda? | ECommerce nhau
Iyo yakawanda-chiteshi zano ndiyo pfungwa iri kuwedzera kuve nekukanganisa kwakakura pakati pezvitoro zvepamhepo nemabhizinesi, asi izvo panguva imwechete zvisingazivikanwe pakati pechikamu chikuru chevashandisi. Huye, zviri chaizvo seti yezvishandiso uye nzira iyo iyo kambani inofanirwa kutanga kusvika sanganisa yako online chiteshi (ecommerce kunyanya) uye isingaite zvinobatika, zvakanyatsoenderana uye zvakabatanidzwa, kuti upe chiitiko chakafanana chekutenga.
Ivo vanogona kuunza mabhenefiti mazhinji mukushandisa kwavo sezvo pakupera kwezuva isu tichave tichishandisa mukana weakawanda makwara akakodzera kutengeswa kwezvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvinotengeswa kuburikidza nemagetsi commerce. Mupfungwa yekuti vanogona kupa kuvonekwa kukuru kwavari nekuva zviwanikwa zvikuru mukutsigira bhizinesi. Nekuti pane mutemo wekutanga mukushambadzira kwedhijitari iyo inoreva kuti mune dzanhasi nguva dzinofanirwa kuchinjika kune zvinodiwa nevatengi.
Mukati meichi chirevo chizere, hapana mubvunzo kuti kuzvivhurira iwe kune mitsva yekushambadzira minda ndeimwe yekuwedzera iyo yako yepamhepo nyanzvi chiitiko chingave nacho. Zvekuti kubva ikozvino zvichienda vari muchinzvimbo chekubatanidza nzira dzinoverengeka dze kutengesa. Chinhu chinogona kuve chimwe chezvinangwa zvako zvaunoshuvira kubva kune chero mhando yekutengesa zano. Muenzaniso wakakodzera kwazvo wemaitiro aya unomiririrwa kana zvichikwanisika kusanganisa kutengesa kure nedhijitari uye kuti mushure mezvose iwo ari mitsara miviri yebhizinesi iri chikamu chezvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi.
1 Multichannel kutengesa: iko kushandiswa kwayo
2 Mipiro yeiyi yekutengesa system
3 Tarisa pane icho chigadzirwa kana sevhisi yaunopa
4 Nematanho maviri akakosha
Multichannel kutengesa: iko kushandiswa kwayo
Rudzi urwu rwekutengesa kuburikidza nenzira dzakasiyana dzinozivikanwa pamusoro pezvose nekushanduka kwayo kuchinjika kune akasiyana mamiriro. Iko kwakasiyana mhedzisiro inogona kuwanikwa zvichienderana nezano rakashandiswa nguva dzese. Izvi ndizvo zvimwe zvezviitiko zvakajairika mumhando iyi yemitambo yekutengesa:
Dzvanya kufona: Ichi chiito chinoshandiswa kune mushandisi akashanyira peji rewebhu kwaakaona chigadzirwa kana sevhisi inomufarira. Saka kuti nenzira iyi, unogona kuisa yako nhamba yefoni kuitira kuti pakarepo a tele opareta taura naye uye umupe ruzivo rwese rwakakodzera uye vhara kutengesa kana kondirakiti. Iri izano iro pamusoro pezvose rinokurudzira kutengesa kubva kune imwe nzvimbo yekutarisisa iyo yakatosiyana zvakanyanya kubva kune yakasara.
Nhaurirano dzepamhepo: ivo vanozivikanwa kazhinji sekurarama online online chats, uye izvo kune rimwe divi, tendera vatengi kumisikidza yakananga hurukuro kuburikidza neyakajeka chikuva. Ndiine chinangwa chakajeka uye icho hapana chimwe kunze kwekugadzirisa kusahadzika kana chiitiko chinogona kugadzirwa panguva yekutenga. Neimwe nzira, zvinotsiva izvo zvinoshandirwa nevatengi asi nehungwanda hwekutengesa.
Vhidhiyo yekutengesa: kumagumo ezuva iri pamusoro pekufungisisa panyama kana mutengesi kuitira kuti iye ave mutariri wekugadzira chikamu ichi chehurongwa zvakanyanya kuratidzira, inova ndiyo nzira yekutengesa. Asi iine yakakosha nuance mune zvirimo uye izvo muchokwadi hakuna imwe kunze kwekupa vatengi mukana wekumisikidza rudzi rwekutengesa neiyi audiovisual contact system. Ndokureva kuti, iyo inopa muhukama hwayo kuswedera kwakanyanya uye humunhu mune yekutengesa maitiro uye kuti pakupera kwezuva chimwe chezvinangwa izvo online zvitoro kana mabhizinesi ari kuteedzera kubva zvino zvichienda mberi.
Mipiro yeiyi yekutengesa system
Ino inguva yekuzvidzikamisa isu mune akasiyana mabhenefiti ayo mashandisiro e multichannel nzira yekutengesa inopa panguva ino chaiyo. Iwe unogona kunge uchinyanya kujairana navo kazhinji muzviitiko zvakawanda, asi mune vamwe ivo zvechokwadi vachakushamisa neyavo mavambo uye hunyanzvi. Semuenzaniso, iwo atiri kuzokuratidza pazasi:
Chinangwa hachisi chimwe kunze kwekuwedzera kutengesa kuburikidza nekuonekwa kukuru uye kusvika kwechiratidzo chako uye zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu.
Zvidzivirire kubva kumaturusi akagadzirwa nemakwikwi uye kuti iwe unofanirwa kuverengerwa nemaitiro ane hukasha kupfuura nakare kose.
Ehezve, zvinokwanisika kwazvo kuti iyo catalog yezvigadzirwa zviri kutengeswa, mitengo uye kukwidziridzwa, mameseji ekusimudzira uye kunyangwe iyo mhando inogona kunge yakasiyana zvichienderana nekero yekutengesa uye zvechokwadi hapana kubatana kwehunyanzvi kunoenderana nematanho.
Iwe unofanirwa kusvika pamhedziso yekuti omnichannel kutengesa ndeimwe nhanho inoenda mukubatanidza bhizinesi rako rebhizinesi kubva pane ese maonero maonero. Hazvishamisi, zvinoreva kuti iwe unogona kutengesa munzvimbo dzakasiyana munzvimbo yepasirese, yakabatanidzwa uye pamusoro penzira dzese dzakawiriraniswa.
Muzviitiko zvese, zvinoda kubatanidzwa kwemapoinzi ekutengesa uye eCommerce mapuratifomu, kugoverwa kwepasirese kwekatalog yezvigadzirwa zviri kutengeswa, kuwiriraniswa kwemasheya. Ichi chinhu chakakosha kwazvo chinogona kutungamira kune kwayo chaiyo kuitisa mune yako nyanzvi chiitiko.
Kunyangwe pane zvinopesana, ichokwadi kuti iwe unozotanga kutengesa munzvimbo dzakasiyana uye kuvapo munzvimbo nyowani zvinoda kuedza kutsva. Izvi zvinogona kugadzira manzwiro akasiyana kwauri kupfuura usati waisa kuzviita, asi uine mubairo muzviitiko zvepamusoro mubhizinesi rako repamhepo.
Uye pakupedzisira, iyo multichannel nzira yekutengesa Ichakupa zviwanikwa zvitsva kana zvinotsigirwa kuitira kuti iwe ugone kukwanisa kuwedzera kutengeswa kwezvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu kubva panguva dzino chaidzo. Ichave chete nyaya yenguva yakamirira kuti mhedzisiro yekutanga ipiwe pamwe nekuitwa kweiyi yakasarudzika zano ratiri kutaura nezvaro muchinyorwa chino.
Tarisa pane icho chigadzirwa kana sevhisi yaunopa
Iyi ipfungwa inobatsira zvikuru iyo inogona kukubatsira iwe kutarisa bhizinesi rako pamhepo. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kufunga kuti chinangwa chako chiri nyore kwazvo: tengesa kana kutaurirana uye nyora zvemukati zvemukati zvinokanganisa vako vangangove vatengi. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuti iwe ubudirire mune iri bhizinesi rekuvandudza. Uye zvechokwadi haugone, zvakanyanyisa kukosha kuti kubva panguva ino unotarisa nekuzvipira kukuru pane chigadzirwa kana sevhisi yaunotengesa kubvira zano rekupera kwezuva rinotarisa shandisa zvakanyanya bhenefiti idzo imwe yetigero dzauri kuzoshandisa kuita iri basa rekutengesa rinokupa iwe.
Uchiri kune rimwe divi, haufanire kurerutsa kuti inogona kunge iri nzira yakakodzera kwazvo zvekuti pakupedzisira vashandisi kana vatengi vanosarudza zvigadzirwa zvako zvese kana masevhisi kukuvadza vamwe. Asi nenjodzi yaunofanirwa kudzivirira chero zvodii uye ndiyo inoguma nevanhu vamwe chete vasingateedzere mucherechedzo munzira dzese, kutaura zvazviri, havatozvishandisa. Izvo zvauchange uchitambisa nazvo nzira zhinji dzekupindirana. Ndokunge, unenge uchitambisa nguva pane zvirimo kana iwe usinga zive nzira yekushandisa ino sisitimu zvinobudirira.
Nematanho maviri akakosha
Chero nzira, iwe unofanirwa kuziva usati waisa zano iri mukuita izvo iwe chaizvo kune miviri mikuru migero: online uye isina internet. Chimwe nechimwe chazvo chinosanganisira mamwe akawanda maitiro ekutengesa kuburikidza. Semuenzaniso, tinogona kuve nekambani yekutengesa yakananga muchitoro chemuviri, kuvhura chitoro mune yemagariro chiteshi uye kutora maodha kuburikidza nazvo uye nekuparadzira katalog yedu kuburikidza nechitoro chepamhepo.
Mumwe nemumwe wavo anofanirwa kuve neakasiyana marapirwo emhedzisiro yavo kuve iwo anotarisirwa mukambani yako kana online chitoro. Iko kunokosha kwazvo kuti iwe usavhiringidzike mune zvinangwa zvinoteedzerwa nekuti pakupera kwezuva hazvisi zvekuve pamasocial network. Kana zvisiri, pane kudaro, chinangwa chako ndechekuve pane akati wandei mageji panguva imwe chete, uye pakati payo, zvechokwadi, masocial network nevamwe vane hunhu hwakafanana.
Ndichiri kune rimwe divi, usakanganwa kuti ino yakasarudzika system inoda kuedza kukuru pane kwako. Kusvika padanho rekuti iwe uchafanirwa kukumikidza yakawanda zviwanikwa kune kwayo chaiyo chiteshi mumwedzi iri kuuya. Zvakare nenyaya yekuti yega yeaya mageru anogona kuve chikamu chekugovaniswa kwekupedzisira kwechigadzirwa kana, zvakapusa, inoumba nzira yekutaurirana. Iwe unongofanirwa kuziva maitiro ekushanda zvinobudirira uye zvine pundutso mukudzivirira bhizinesi rako repamhepo. Chinhu chisingawanzo chiri chechokwadi mune ese mamiriro uye mamiriro.
Iyo multichannel zano iri yekupedzisira modhi iri kusimuka nekuda kweakawanda mikana ayo akavhurika kwauri kana uchishandisa dzakasiyana nzira dzeamarudzi ese. Kusvika padanho rekuti iri kuwedzera kuwanda kumakambani edhijitari kusarudza iyi fomati mukutungamira. Kubva kwaunogona kunatsiridza kutengesa kwezvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu zvine hunyanzvi hwakanyanya kupfuura nakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ndeipi nzira yekutengesa yakawanda?